(अन्तर्वार्ता) गण्डकीमा आलोपालो सरकार सञ्चालन स्वाभाविक: माओवादी नेता चुमानMain Samachar
(अन्तर्वार्ता) गण्डकीमा आलोपालो सरकार सञ्चालन स्वाभाविक: माओवादी नेता चुमान
३२ श्रावण २०७८, सोमबार १८:२९ प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकीका अध्यक्ष हितराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कांग्रेससँग आलोपालो हुनुपर्ने माग उठाएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
मुलतः प्रदेश अध्यक्ष पाण्डेको माग लुम्बिनीको सत्ता आलोपालो सञ्चालन विधिलाई लिएर उठेको र स्वाभाविक भएको माओवादी केन्द्रकै नेता तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।
हाल गण्डकीमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार छ, भने लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । लुम्बिनीमा पहिलो आठ महिना माओवादीका कुलप्रसाद केसीले सत्ता सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । सोही मुताबिक गण्डकीमा पनि कांग्रेसले माओवादीलाई अबको आठ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको हो ।
उता माओवादी केन्द्रका कास्की जिल्ला इन्चार्ज राजकाजी गुरुङले भने सोही विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचारको खण्डनमा उत्रिएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले पार्टी भित्रै दुई धार देखाएको छ । किन पनि भने, गुरुङ पार्टीमा प्रभावशाली मानिन्छन् ।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘सरकार सञ्चालनमा आलोपालो विधि अपनाउने भनेको भनेर कतिपय व्यक्ति र समाचारमा आएको कुरा झुट हुन् ।’
उनले गठबन्धन जुन उद्देश्यले बनाएको हो त्यसमा इमान्दारिताका साथ लाग्ने बताएका छन् । समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा गर्दै जाने तर गलत नियतका साथ आफूहरु बिचमा खेल्ने ठाउँ नदिने भन्दै सार्वजनिक खबरप्रति गुरुङले ‘भ्रम’ भन्दै खण्डन गरेका हुन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको मागप्रति थप स्पष्ट पार्न हामीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई तीन प्रश्न गरेका छौं ।
लुम्बिनीमा जस्तै गण्डकीको सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी बीच आलोपालो हुनुपर्छ भन्ने मागप्रति संसदीय दलको नेताको हैसियतमा तपाईंको धारणा के हो ?
गण्डकीमा यो पहिले नै चर्चा थियो, आलोपालोको । तर उहाँ (लुम्बिनीमा) ढिलो भयो सरकार बनाउन । पहिला गण्डकीले बनायो । गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनाउँदा कांग्रेससँग छलफल भएन, चर्चा मात्रै भयो । आलोपालोको विषयमा निर्णय भएन । यो त स्वाभाविक कुरा हो लुम्बिनीमा आलोपालो भयो भने गण्डकीमा आलोपालो हुन्छ । त्यहाँ भएन भने गण्डकीमा पनि हुँदैन ।
तपाईंकै पार्टी भित्रबाट यस विषयमा नेता राजकाजी गुरुङले गठबन्धनको उद्देश्य विपरित भन्नु भएको छ । पार्टीमा दुईथरी धार देखियो नि ?
बैठकमा उठेको कुरा बाहिर आयो । मिडियाहरुले अध्यक्ष हितराजसँग सम्पर्क गरे । उहाँले आफूले बोलेको कुरा राख्नु भयो होला सायद, त्यो अध्यक्षले बोलेको कुरा हो । त्यसबारेमा केन्द्रको गठबन्धनले निर्णय गर्ने कुरा हो । विषय स्वाभाविक रुपले उठ्छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई पनि थाहा भएको कुरा हो । लुम्बिनीमा आलोपालो भयो भने गण्डकीमा स्वाभाविक रुपले उठ्छ भन्ने कुरा नेताहरुलाई पनि थाहा छँदै छ । यसबारे नेताहरुले जे निर्णय गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ । आलोपालो भएन भने दुबैतिर हुँदैन नत्र दुबैतिर आलोपालो हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरुले पनि यो माग उठाउन भन्नुभएको हो ?
सबैले यसलाई स्वाभाविक रुपले नै बुझ्नु भएको कुरा हो । उहाँहरुको आलोपालो हुने हाम्रो नहुने भन्ने लागिहाल्छ । त्यो स्वयं कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि लाग्छ, उहाँहरुले पनि भन्ने कुरा हो ।